Mila averina ny filaminana ao Antananarivo – Malag@sy Miray
Raha tsorina dia mikorontana tanteraka Antananarivo, renivohitr’i Madagasikara. Hita taratra misongadina ny fahantrana sy ny loto.
tsy mandeha amin’ny laoniny ny fifamoivoizana.
Ny kaominina sy ny mpitandro filaminana dia hita miasa eny rehetra eny. Saingy eo amin’ny fotodrafitr’asa no tsy maharaka. Ny arabe dia feno lavaka ka ny tampitampina « bombô voanjo » aza amin’ny toerana maro tsy misy intsony. Mizotra miadana noho izany ireo fiara madinika, eny fa na dia ireo tsy mataho-dàlana hita fa efa mihamaro eto an-drenivohitra koa aza dia mitsitsy lavaka.
ny taksibe tsy manaja ny fitsipiky ny fifamoivoizana
Ny taxibe hatramin’izay ka hatramin’izao dia mbola tsy misy tena hoe manaja fifamoivoizana sy manaraka ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana. Maro amin’izy ireny no mbola mandray mpandeha etsy sy eroa na dia tsy amin’ny toerana fiantsonany aza izany. Misy ihany koa no mijanona amin’ny toerana fiantsonana ihany saingy mibahana afovoan-dàlana no sady tsy miditra maka sisiny fa mijanona ety aoriana be ety. Ny antsoantso sy ny tabataba ny toerana ho aleha no somary mba ohatra nihena saingy toa nofy ihany izany indraindray. Ny varavaran’ny taksibe moa izany dia misokatsokatra tsy fantatra hoe hampiditra olona na hampidina olona rehefa eny amin’ny fitohanana rehetra eny. Vitsy, mba tsy ilàzana hoe tsy misy intsony ireo fiara fitanterana no mampiasa ireny « clignotant » na ireo jiro mipipika fampilazàna fiviliana havia na havanana. Ary ny fiara « sprinter » moa izany dia toa lasa fiara fitanterana mpanao « rallye »
mihamaro ny mponina
Ny olona dia mihamaro raha Antananarivo no resahina. Misy ireo ankizy teo aloha no mitombo taona ka lasa tanora dia mameno ny arabe, ao koa ireo mpila ravin’ahitra avy any ambanivohitra ka mifindra monina ety andrenivohitra mba hitady izay ho arapany. Ny faritra Ambohipo, 67Ha, Itaosy sy ny manodidina moa dia lasa tanan-dehibe ao anaty tanàn-dehibe. Amin’izany fahamaroany izany dia tsy misy intsony ireo miampita eny amin’ny toerana voatokana hanaovana izany na ny « passage zebré » izany. Ny « passage clouté » moa dia efa voatampina ary noendahina ny vy tamin’izany ka nosoloina marika miloko mitsipitsipika mavo na fotsy izany taty aoriana. Ny afo telo loko moa araka izay efa fantatra dia lasa mozean’ny tanàna ka fantatry ny taranaka aty aoriana fa efa nampiasa izany Antananarivo hatramin’ny repoblika faharoa ary jiro sinoa kosa taty aoriana mandra-pahafatin’izany.
Samy miampipita eny amin’izay mahafaly ny fony sy mahafinaritra azy ny tsirairay. Ny tena koa aza efa mba tratran’izany. Nanao izany koa satria tsy misy toerana fiampitàna ilay faritra naleha no feno mpivarotra amoron-dàlana ny sisin’arabe.
feno mpivarotra ny sisin’arabe
Raha izay mpivarotra izay no jerena dia tsy voafehy intsony ny mpivarotra raha eto Antananarivo no resahina. Raha ohatra an’i Behoririka hiakatra an’i Tsiazotafo iny ohatra no jerena dia vao tsy ampy herintaona akory zaiy no tsy azo atao ny mipetraka amin’ny ilany havanana’ny làlana manomboka eo amin’ny tranobe Ramarosaona ka hatrany amin’ny lasantsy Total. Nasian’ny pilsy monisipaly vy mavesatra mihitsy moa tamin’izany ny kodiaran’ny fiara izay tratra miantsona teny. Ankehitriny dia vao maraina amin’ny 7ora dia efa feno « minibus » n-dry zareo sinoa mamatratra entana na mamoaka entana iny toerana iny. Avy eo dia misolo fiara karetsaka sy fiara madinika samihafa ka tsy madiodio ny faritra raha tsy any aorian’ny amin’ny dimy ora hariva.
Feno mpivarotra tsy ara-dalàna koa ny sisin’arabe. Mivarotra anana, pataloha, kapakapa, ranomanitra, firavaka sandoka, sns. Tsy ara-dalàna satria dia fantatra fa tsy misy na iray aza mandoa patanty any amin’ny mpamory hetra amin’izy ireny. Tsy hahazo faktiora na farafaharatsiny « bon de livraison » koa ianao raha mividy entana amin’izy ireny. Ary taloha azy dia mifanenjika amin’ny sandry ben’ny kaominina izy ireny saingy ankehitriny dia navela nivarotra malalaka.
Ny bisikileta, ny « scooter » ary ny sarety sy ny posy koa dia samy manao izay saim-patany amin’ny fifamoivoizana.
Na dia efa noraràna aza ireo posy sy sarety tsy hiditra amin’ny faritry ny afovoan-tanàna dia navela indray izy ireo amin’izao fotoana izao ka dia miandry ny hafainganam-pandehany mora izay fiara tratra aoriany. Ireo izay tsy mitandrina moa dia mety ho voakikin’ny vy be sy ny entana izay entiny.
Hatreto aloha dia sahinay ny miteny fa dia mafy izay ben’ny tanàna afaka hanova ireo fahazaran-dratsin’ny mponina ireo ary mankahery azy izahay. Ny resaka fahadiovana sy ny fandriam-pahalemana dia mbola tsy asianay resaka aloha